Burmese | Land Portal
Ler mais acerca de 3rd Mekong Regional Land Forum
Ler mais acerca de Persistence and change in Hakha Chin land and resource tenure: A study on land dynamics in the periphery of Hakha
In Myanmar, millions of farmers are at risk of being considered trespassers on their own land after the adoption ofacontroversial law.
Ler mais acerca de Myanmar: Millions of farmers are at risk of being considered trespassers on their own lands
In Myanmar, almost half of the rural population is said to be landless : it is the highest rate of landlessness in the Mekong region.
Ler mais acerca de Myanmar: Landlessness
Ler mais acerca de Institutional Strengthening Training Curriculum
Ler mais acerca de National Environmental Policy of Myanmar and Myanmar Climate Change Policy (2019)
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောအခြပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ရွှေရိုးမ သစ်တောအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပါသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် တာဝန်ယူမှုရှိသော အာရှဆိုင်ရာ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အပိုင်း (၃) စီမံကိန်း (Responsible Asia Forestry and Trade-III project RAFT-3) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဂွမြို့နယ် ဒေသခံပြည်သူမျာ
Ler mais acerca de ရွှေရိုးမ သစ်တောအခြေပြုကြိမ်အချာထည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
Ler mais acerca de Gender in REDD+: Q&A handbook - Myanmar